Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny Aogositra 2009
Tantara tamin'ny Aogositra, 2009
22 Aogositra 2009
Mpanoratra Fred Petrossian · Afganistana
Afghans an-tapitrisany no nihaika ny fandrahonan'ny Talibans ka nandeha nifidy tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena faharoa nisy hatramin'izay teo amin'ny firenena tamin'ny alakamisy, araka ny filazan'ny gazety tandrefana. Nisy ihany, araka ny tatitra herisetra madinika niseho tetsy sy teroa ary tahaka ny vitsy ny mpifidy tao an-drenivohitra sy tany atsimon'ny faritany...
21 Aogositra 2009
Hevitry ny mpamaham-bolongana momba ny fampahafantarana ny VIH/SIDA any amin'ny Tontolo Arabo
Fady any amin'ny ankamaroan'ny faritra Arabo ny miresaka ny momba ny VIH/SIDA, na dia misy aza ny fandaharan'asan'ny PNUD na sampandraharahan'ny Firenena Mikambana misahana ny fampandrosoana tahaka ny HARPAS izay miezaka ny mampahafantara ny momba azy ity. Raha mitatitra ny tsy fahafantarana ny momba ny VIH/SIDA ny mamaham-bolongana sasany, dia...
Sina: Tanora iray voadaroka mandra-pahafatiny noho ny fiankinan-doha amin'ny aterineto
Tamin'ny volana ambony, ny Ministera Sinoa momba ny Fahasalamana dia nilaza fa ny fampiasana herinaratra [electroshock treatment] hitsaboana ny “fiankinan-doha amin'ny aterineto” dia tokony hatsahatra. Na izany aza anefa, tsy nidika izany fa ny toeram-pitsaboana mitsabo ny “fiankinan-doha amin'ny aterineto” dia nampitsahatra ny fampiasana fampijaliana.
Any Brezila, misy lalàna momba ny fitantanana ny fako mivongana novàna mba hanalàna ny fako elektronika. Ny dingana voalohany hiadiana amin'izany fanovàna izany dia ny famoronana ny Hetsika ho an'ny Fako Elektronika mba hanangonana ny fanohànan'ireo mpikirakira ny aterineto ho fanodinana bebe kokoa ireo vokatra elektronika.
20 Aogositra 2009
Repoblika Dominikana: Ho voavaha ve ny olan'ny delestazy?
Mpanoratra Rocio Diaz · Amerika Latina
Isaky ny faha-16 Aogositra any amin'ny Repoblika Dominikana, dia fahazaran'ny governemanta amin'io daty io satria feno indray ny taona niasany, ny fanoloan'ny filoha Leonel Fernández ny mpikambana sasantsasany ao amin'ny governemantany. Tsy dia nisy loatra ny fanovana lehibe, fa nisy kosa ny iray izay niteraka adihevitra. Ny filoha lefitry ny...
Mpanoratra Jillian C. York · Maoritania
Taorian'ny fanonganam-panjakana herintaona lasa izay, sy ny nahavoafidy ny mpitarika io fanonganam-panjakana io Jeneraly Mohamed Ould Abdel Aziz ho filoham-pirenena, ary ny voalohany sady farany nipoahana baomba nahafaty tao amin'ny firenena ny fiandohan'ny volana aogositra, dia nisy fiovana be tany Mauritanie. Ny 12 aogositra lasa teo dia nampitsahatra ny fandaharan'asany...
Kambodza : Manontany ny Oliravin'ny vanja milevina
“ Mananjo ho tsara tarehy ny olona rehetra !” No nanombohan'ny Mpifaninana ho Oliravin'ny olona voan'ny vanja milevina ny taratasy misokatra nosoratany, izay fifaninanana natombok'i Morten Traavik avy ao Norvezy. Araka ny voasoratra ao amin'ny tranokalam-pifaninanana, hanomezana fankaherezana ireo mitondra takaitra noho ny vanja milevina sy hihaikana ny fijery ny...
18 Aogositra 2009
Medaily volamena Olaimpika sy fitazonana ny zava-bita vaovao manerantany eo amin'ny hazakazaka 100 metatra sy 200 metatra no vitan'ilay Jamaikana Usain Bolt, ary tao anatin'ny fandresena nahoraka sy nahavalalanina no nahavitany izany tamin'ny faran'ny herinandro nandritra ny fiadiana tompondaka manerantany IAAF notontosaina tany Berlin, tafiditra 9.58 segondra nanamontsana ny zava-bitany...